Ahoana ny fiasany? Famoronana orinasa an-tserasera miaraka amin'i FiduLink
Safidio ny fanapaha-kevitry ny orinasam-piaramanidina manerana ny kaontinanta 5 hita ao amin'ny lampihazo Fidurohy. Safidio ny firenena dia hanamafy ny baikonao amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fanarahana ireo dingana ao amin'ny tsenan'i Fidurohy. Ity dingana ity dia mampahafantatra ny mpanolotsainao vaovao Fidurohy (mpisolovava eo an-toerana, kaonty eo an-toerana, mpisolovava eo an-toerana) ny baikonao.
Aza adino ny mampiditra ireo antontan-taratasy mifandraika amin'ny fangatahanao famoronana orinasa an-tserasera (homena anao ny torolàlana ho an'ny mpampiasa rehefa voamarina ny fangatahanao fampidinana) (lisitry ny antontan-taratasy eo amin'ny pejy)
Fisoratana anarana momba ny orinasa
Ny fisoratana anarana ara-dalàna momba ny hetsika
Ny mpandraharaha Fidu anaorohy manohana ny fangatahana famoronana orinasao. Ny mpanolotsainao dia handefa anao ny rohy mankany amin'ny endrika famoronana orinasa Elektronika ao amin'ny firenena izay nofidinao. Mandritra io dingana io dia tsy maintsy omena anao ny antontan-taratasinao (zavatra mitovy amin'izany raha manana namana ianao).
Raha ny fandaharam-baovao sy ny fandriam-pahalemana ho an'ny mpanjifantsika sy ireo mpiara-miasa aminy ary na mpampiasa vola, dia ilaina ny fanamarinana ireo antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny filazam-baovao. Ny fomba fananganana orinasa rehetra dia tanterahan'ny mpisolovava Fidurohy, Mpisolovava Fidurohy na ny kaonty Fidurohy hevi.
Ny fanaovana tsiambaratelo feno dia fidirana amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny serivisy amin'ny famoronana orinasa an-tserasera. Fidurohy anontanio ireo mpitsabo Fidu rehetra ao aminyrohy , Mpisolovava Fidurohy , Fidu Accountantsrohy dia mpiasa hanolotra tsiambaratelo tanteraka momba ny serivisy sy tombontsoa.
Mandritra ny fizotry ny famoronana orinasa rehetra dia hampahafantarin'ny mpanolotsainao anao ny fivoaran'ny laminasa sy ny fangatahana rehetra momba ny orinasanao.
NY Vonona ny orinasa !
JEREO NY ZAHOANA 47 FIVORIANA ANY AFRIKA
JEREO NY AINGA-TANANA TAO FIVORIANA ETO AFRIKA DIA TOKONY NY FAHORO ATSIKA
JEREO NY TANORA
JEREO NY FIVORIANA FAHA-21 eto ASIA
JEREO NY AINGA-TANANA TANY ANIA ASIA MORAOTRA NY FIKOTANA AN-TOKONY
JEREO NY 23 JORISY FIKOTANA TAO AMERIKA
JEREO NY TENIN'NY MPANOMPOANA ANY AMERIKA I ARAKA
JEREO NY FIVORIANA 32 amin'ny EUROPE
JEREO NY HAFA AO AMIN'NY FIKAM-PONENANA ETO EUROPE IREO DAHOLO EUROPE ETO AN-TOERANA
JEREO NY FIVORIANA 4 ao OCEANIA
JEREO NY ZAVA-ZANAKO TANY ACEANIA MORAOTSIKA ATSIKA ATSIKA ATSIKA
Lisitry ny antotan-taratasy hanomezana ny fananganana orinasa lavitra